Puntland iyo Galmudug oo heshiis ku gaaray Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland iyo Galmudug oo heshiis ku gaaray Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Puntland iyo Galmudug ayaa isku afgartay in ay ka wada shaqeeyaan arrimaha ammaanka, dib u sheesiinta, iyo xoojinta siyaasadda iyo dhaqaalaha, kadib kulan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maanta oo Jimce ah.
Labada maamul ayaa ku heshiiyay sameynta guddiyo ka shaqeeya waxyaabaha lagu heshiiyay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland.
Kulanka ka dhacay Gaalkacyo ayaa ahaa kii ugu horeeyay oo labada madaxweyne ay yeeshaan tan iyo markii xilka ay qabteen.
Bilihii la soo dhaafay, labada maamul ayaa iska kaashanayay howlgalada amaanka gobolka Mudug, taasoo keentay in la dilo kooxo katirsan xagjiriinta Al-Shabaab, kuwo kalena la qabtay.
June 26, 2020 Madaxweynaha Puntland oo Madaxweynaha Galmudug ku qaabilay Gaalkacyo